Calla, usoro vidiyo nke na-arụ ọrụ na Jitsi mana aka pụrụ iche | Site na Linux
Calla, usoro vidiyo nke na-arụ ọrụ na Jitsi mana aka pụrụ iche
Ọchịchịrị | | Aplicaciones
Ọ bụrụ na ị na-achọ usoro mkparịta ụka vidiyo eleghi anya Calla nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka gị na ọ bụ na ruo ọtụtụ ụbọchị oru ngo a na-mepụtara n'okpuru Jitsi Meet audio na video ogbako usoro a mara ọkwa, nke na-enye ọtụtụ ndị sonyere ohere ikwu okwu n'otu oge.
N'ozuzu, n'oge ogbako n'ịntanetị, naanị otu onye so na-ekwe ka o kwuo okwu, mkparịta ụka na-enwekọ nsogbu.
1 Banyere Calla
2 Gbalịa Calla
Na Calla, ịhazi nkwukọrịta eke, nke otutu mmadu nwere ike ikwu n'otu oge, A na-atụ aro ka ị jiri igodo n'ụdị egwuregwu na-egwu egwuregwu.
Ihe puru iche nke uzo a choro bu na olu na uzo nke uda Emebere ha dika ọnọdụ na anya nke ndị sonyere na ibe ha.
Tụgharị aka ekpe na aka nri na-agbanwe ọnọdụ stereo isi iyi, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ikewapụ olu ma mee ka nkwukọrịta bụrụ nke mmadụ.
Ndị na-akparịta ụka na-agagharị na mpaghara egwuregwu egwuregwu ha g canzukọ kwa n'ìgwè n'ebe ahu.
Maka mkparịta ụka nkeonwe, ọtụtụ ndị sonyere nwere ike ịhapụ otu ndị isi, ma sonyere mkparịta ụka ahụ, o zuru ezu ịbịakwute igwe mmadụ ahụ n'ọgba egwuregwu.
A na-enye nhọrọ nhazi mgbanwe, na-enye gị ohere ịkọwapụta kaadị nke gị nke ọma ma hazie nhazi interface iji kwado mkpa gị.
Ya mere Kpuchie ọnụ Ọ bụghị usoro ọgbakọ mkparịta ụka vidiyo ọhụrụ, mana bụ ọbá akwụkwọ akpa maka Jitsi Meet nke ahụ na-agbakwunye iche iche ọdịyo, iji nwee ike ịmepụta ụlọ nzukọ nzukọ na karịa ihe niile iji nye ya mmetụ pụrụ iche.
Calla na-agbakwunye obere map ụdị RPG na nlele Jitsi. Ọ na-enye gị avatar ị ga-ejegharị n'ime ụlọ ahụ ma n'ime ya ndị ọrụ na-ahọrọ ebe ịnọdụ ala n'ihe metụtara ndị ọrụ ndị ọzọ.
Maka ndị nwere mmasị ịnwale usoro mkparịta ụka vidiyo a, ha nwere ike ịnwale ya site na ịga gaa na weebụsaịtị a.
N'ebe a n'ụzọ dị mfe ha ga-edekọ, ebe ha ga-ekenye aha njirimara ma a ga-ajụ ha maka email ha.
Mgbe nke ahụ gasị, ha ga - ahọrọ ụlọ ebe ha chọrọ ịbanye na voila, nke ahụ ga - enwe ike ịnwale Calla.
Ugbu a banyere ntinye nke usoro ahụ, n'oge ọ gaghị ekwe omume ebe ọ bụ na onye nrụpụta na-eme nyocha na ngbanwe ọ bụla na koodu ahụ.
Mana ozigbo ntuziaka nrụnye ọhụụ, ha ga-enwe ike ịme ya na sava nke ha.
Dị ka ekwuola na mbido, Calla na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Jitisi, yabụ na ha ga-enwerịrị nke a ma ọ bụ ọ bụrụ na ha emebeghị, ha nwere ike ịkwalite usoro ahụ site na isoro ntuziaka ndị a.
Ihe mbụ ha kwesịrị ime bụs have gnupg2 arụnyere na wụnye Jitisi site na channelụ gọọmentị nke nkesa gị.
N'ihe banyere Ubuntu, Debian na nkwekọrịta:
Mgbe nke ahụ mechara ị ga-ahazi ngalaba ihe nkesa ahụ (ma ọ bụ ọ bụrụ na ị gaghị arụ ọrụ naanị n'okpuru IP nke a naanị na ọ ga-atụ aro ka a hazie ya na IP static) ma hazie DNS.
Iji hazie DNS anyị ga-pịnye:
sudo hostnamectl set-hostname meet
Wee tinye otu FQDN ahụ na / wdg / ụsụụ ndị agha faịlụ, na-akpakọrịta ya na loopback address:
x.x.x.x meet.example.org meet
Mara: xxxx bụ adreesị IP ọha nke ihe nkesa gị na-esonyere ngalaba ahaziri ahazi, ọ bụrụ na ịnweghị ngalaba, hapụ IP.
Ugbu a anyị kwesịrị ịgbakwunye ebe nchekwa Jitsi, n'ihe banyere Ubuntu, Debian ma obu ndi ozo:
# update all package sources
N'ikpeazụ mee ka ọdụ ụgbọ mmiri maka Jitsi, ị nwere ike ime ya na ufw firewall:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere nhazi Jitsi, ị nwere ike ịkpọtụrụ ya esonụ njikọ.
Iji mara nke ọhụrụ ntuziaka nwụnye Calla, ị nwere ike lelee ha ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Calla, usoro vidiyo nke na-arụ ọrụ na Jitsi mana aka pụrụ iche
Chrome 86 rutere na mgbanwe URL, ndozi nchedo na ndị ọzọ
Wallabag: Open iyi onwe-Bochum ngwa ịzọpụta weebụsaịtị